अरुण फाईनान्सको सेयर बिक्री
काठमाडौ, ७ भदौ । अरुण फाईनान्सको सेयर बिक्री प्रवन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेड नियुुक्त भएको छ । फाईनान्सले भदौ १२ गते देखि कार्यान्वयनमा आउने गरी ग्लोवललाई बिक्री प्रवन्धकमा नियुक्त गरेको ह...
प्रभु बैंकले शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने
काठमाण्डौ । प्रभु बैंक लिमिटेड र काठमाण्डौ जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १४ कालिमाटी स्थित काठमाण्डौ ईञ्जिनियरिङ्ग कलेज (KEC)का बिच काठमाण्डौ ईञ्जिनियरिङ्ग कलेजमा स्नातक तहमा अध्ययन गर्ने विद...
राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको नाफा २२ करोड भन्दा बढी
काठमाण्डौ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडले आ.व.२०७२-०७३ मा २२ करोड २२ लाख ९५ हजार नाफा आर्जन गरेको छ । गत आ.व. मा बैंकको मुनाफा १७ करोड ९० लाख २६ हजार रहेको थियो । शेयर पूँजी ७६ करोड ८२ लाख ६० ह...
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकद्धारा ४१ प्रतिसत लाभांस घोषणा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ४१ प्रतिसत लाभांस बितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैकले आर्थिक बर्ष २०७२/०७३ को खुद मुनाफा मध्येबाट २० प्रतिसत बोनस सेयर र २१ प्रतिसत नगद लाभांस बितरण गर्ने प्रस्...
राष्ट्र बैकले भोलि पाँच अर्बको निक्षेप उपकरण बिक्री गर्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैैकले भोलि मंगलबार पाँच अर्ब रुपैयाँको निक्षेप उपकरण बिक्री गर्ने भएको छ । वाणिज्य बैक, बिकास बैक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुलाई बोलकवोलको माध्यमद्धारा निक्षेप उपकरण बिक्री गर्न ल...
सहारा विकास बैंकले उत्पात मच्चायो , एक अर्ब ३२ करोड रुपैँया मुनाफा
काठमाडौं । सहारा विकास बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा एक अर्ब ३२ करोड रुपैँया मुनाफा आर्जन गरेको छ । सहारा विकास बैंकले उत्पात नाफा कमाएको हो । यस्तै बैंकले अघिल्लो आवमा ९८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्जन ...
ज्योति बैकको अध्यक्षमा कोईराला
काठमाण्डौ । ज्योति बिकास बैंकको अध्यक्ष पदमा धुु्रव कोईराला नियुुक्त भएका छन् । बैकको सञ्चालक समितीको बैठकले कोईरालाको अध्यक्षतामा राम कुुमार श्रेष्ठ, हरिचन्द्र खड्का, हरि प्रसाद आर्चाय, नारायण प्रसाद...
सेन्चुरीको हकप्रद र आरएसडिसीको साधारण सेयरको बिक्री खुल्ला
काठमाण्डौ ,भदौ ५ । सेन्चुरी कर्मसियल बैक र आरएसडिसी लघुबित्त बित्तीय संस्थाको सेयर बिक्री खुल्ला भएको छ । भदौ पाँच गते आईतबार सेन्चुरीले हकप्रद र र आरएसडिसीले साधारण सेयरको बिक्री खुल्ला गरेका हुुन । ...